Pane zvishoma zvishoma zvasara kusvikira macOS High Sierra 10.13 yatanga kubvumidzwa | Ndinobva mac
Tangori maawa maviri chete kubva kuvhurwa zviri pamutemo kweshanduro nyowani yeMac inoshanda system uye mushure mekuona kuvhurwa kweIOS 11, tvOS 11 uye watchOS 4 mazuva ano, vashandisi veMac vari kuzove nenguva yedu nhasi. Apple ichaburitsa vhezheni iyo isinganyatso kumira kune ayo aesthetic novelties kana matsva mashandiro, asi ine yakakwira nhanho maererano neyakajairika kugadzikana uye kunyanya shanduko kune itsva AFPS faira system.
Zvinofanira kutaurwa kuti vashandisi vasina SSD dhisiki kana vane maMac ane Fusion Dhiraivha, zvakanakisa kusashandisa iri basa nyowani, muchokwadi Apple pachayo inojekesa kuti avo vashandisi vane Fusion Drive paMacs avo vanofanirwae dzokera kuHFS + fomati.
Ngazvive sezvazviri, isu tiri padyo kwazvo nekugamuchira nhau dzakaratidzwa kuWWDC yekupedzisira gore rino uye Vashandisi vanogara muSpain vanotarisirwa ku uine iyo nyowani macOS High Sierra vhezheni iripo. KuMexico ichasvika na12 masikati uye kuArgentina na14pm.
Chii chitsva muMacOS High Sierra hapana mubvunzo chinonakidza uye kurudziro ndeyekuvandudza timu yedu hongu kana hongu sezvo kuvandudzwa kunoitwa kuri kunakidza munhu wese uye Kana yedu Mac iine macOS Sierra, haizonyanya kuwedzera nekuda kweshanduro nyowani ye macOS High Sierra.
Unogona kuwana ruzivo rwese nezve iyi nyowani vhezheni muNdiri kubva kuMac, kubvira kubva pakuratidzwa kwayo kusvika nhasi tanyora zvinyorwa zvichitsanangura chimwe nechimwe chezvinhu zvitsva zvakawedzerwa. Kana iwe uri mumwe weavo vane yeruzhinji beta vhezheni yakaiswa pakombuta yako, iwe unofanirwa kubuda muchirongwa kuti iyo yekuvandudza iite uye izvi zvinoitwa zvakananga kubva Sarudzo dzeSystem> App Store. Nhasi tinofanirwa kugadzirisa uye zvakanakisa kuteerera kuti uve pakati pevokutanga kurodha pasi nekuisa iyo vhezheni nyowani kana kumirira zvakananga kusvika mangwana kana zuva rinotevera kuti riite iyo yekuvandudza. Munguva pfupi yapfuura, maSeva eApple anogona kubata shanduro idzva zvakakwana, asi zviri nani kuti usamhanye uye pamusoro pezvose usati wagadzirisa iwe tevera aya matipi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Pane zvishoma zvishoma zvasara kusvikira macOS High Sierra 10.13 yaburitswa zviri pamutemo
MailButler ndiyo inokodzera kuwedzera mamwe mabasa kuMail